EVY's Kitchen: Cream of Mushroom and Garlic Bread
မထူးခြားတဲ့ ညစာလေးပါ။ ထွေထွေထူးထူးဘာမှ မလုပ်ချင်တာနဲ့ ရှိတဲ့ cream of mushrooms ကိုဖောက် ၊ပေါင်မုန့် ကို garlic spread နဲ့ ကင်ပြီး အစိတ်ကလေးတွေစိတ်ထားလိုက်တာပါ။ ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်မှုဆိုလို့ မီးကင်စက်ထဲကို ထည့်လိုက်တာနဲ့ ပြင်ဆင်တာလေးပဲရှိတာပါ။ တခါတလေတော့လည်း မပင်မပန်းအေးအေးဆေးဆေးပေါ့။
My simple and quick dinner (Cream of mushrooms and garlic bread). Fast, extremely easy and your dinner will be ready in 10mins time. :D
Posted by Evy at 6:07 PM
garlic bread & cream of mushroom are perfect match, yummy